Iindaba -Ngaba umbhobho we-PE ulungele ukusetyenziswa kwamanzi okusela?
Iinkqubo zemibhobho ye-polyethylene zisetyenziswe ngabaxumi bethu kunikezelo lwamanzi okusela okoko baziswa ngoo-1950. Icandelo leplastikhi lithathe uxanduva olukhulu ekuqinisekiseni ukuba iimveliso ezisetyenziswayo azichaphazeli umgangatho wamanzi.
Uluhlu lweemvavanyo ezenziwa kwimibhobho ye-PE zihlala zigubungela ukungcamla, ivumba, ukuvela kwamanzi, kunye novavanyo lokukhula kwezinto eziphila emanzini. Olu luluhlu olubanzi ngakumbi lovavanyo kunangoku olusetyenziswayo kwizinto zombhobho zemveli, ezinje ngesinyithi kunye nesamente kunye neemveliso ezinesamente, kumazwe amaninzi aseYurophu. Yiyo loo nto kukho intembelo enkulu yokuba umbhobho we-PE unokusetyenziselwa unikezelo lwamanzi aselwayo phantsi kweemeko ezininzi zokusebenza.
Kukho umahluko kwimimiselo yesizwe kunye neendlela zovavanyo ezisetyenziswa phakathi kwamazwe aseYurophu. Ukuvunywa kwesicelo samanzi okusela kunikiwe kuwo onke amazwe. Ukuvunywa kwale mizimba kulandelayo kuyavunywa kwamanye amazwe aseYurophu kwaye ngamanye amaxesha ngakumbi kwihlabathi liphela:
Uhlolo lwamanzi okusela lwase-UK (DWI)
IJamani Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW)
INetherlands KIWA NV
Iziko lase-France le-CRECEP laseRecherche, d'Expertise et de
Isiseko seSizwe sococeko sase-USA (i-NSF)
Iikhompawundi zombhobho ze-PE100 kufuneka zenziwe ukuba zisetyenziswe kwizicelo zamanzi okusela. Ngapha koko umbhobho we-PE100 unokwenziwa ukusuka kumbala oluhlaza okwesibhakabhaka okanye omnyama onemigca eluhlaza okwesibhakabhaka echaza ukuba ilungele ukusetyenziswa kwizicelo zamanzi okusela.
Ulwazi oluthe kratya malunga nokuvunywa kokusetyenziswa kwamanzi okusela lunokufumaneka kumenzi wombhobho ukuba uyafuneka.
Ukulungelelanisa imimiselo kunye nokuqinisekisa ukuba zonke izinto ezisetyenzisiweyo xa kudityaniswa namanzi okusela ziphathwa ngendlela efanayo, i-EAS European Approval Scheme iyaphuhliswa, isekwe kwiKhomishini yaseYurophu.
UK Uvavanyo lwaManzi okusela (DWI)
Jemani I-Deutsche Verein des Gas- kunye neWasserfaches (DVGW)
elamaDatshi IKIWA NV
Fransi IZiko leCRECEP laseRecherche, d'Ubuchule et de
i-USA Isiseko seSizwe soCoceko (NSF)
Umyalelo 98/83 / EC. Oku kujongwa liqela labaLawuli bamanzi baseYurophu, i-RG-CPDW-IQela eliLawula iiMveliso zoKwakha ekunxibelelaneni naManzi aSelwayo. Kujongwe ukuba i-EAS iqale ukusebenza ngo-2006 ngendlela elinganiselweyo, kodwa kubonakala ngathi akunakulindeleka ukuba iphunyezwe de kube lixesha elifanelekileyo xa iindlela zovavanyo zisendaweni yazo zonke izinto.
Imibhobho yeplastiki yamanzi okusela ivavanywa ngokungqongqo lilungu ngalinye leLungu le-EU. Umbutho wabathengisi bempahla ekrwada (iPlastikhi yaseYurophu) kudala ikhuthaza ukusebenzisa iiplastikhi zokunxibelelana nokutya xa kusenziwa amanzi okusela, kuba imithetho yonxibelelwano yokutya yeyona nto ingqongqo ukukhusela impilo yabathengi kunye nokusebenzisa uvavanyo olunetyhefu njengoko kufuneka kwizikhokelo zeKomishini yeSayensi yeKhomishini yaseYurophu. Ukutya (enye yeekomiti ze-Arhente yeMigangatho yokutya ye-EU). IDenmark, umzekelo, isebenzisa umthetho wokunxibelelana nokutya kwaye isebenzisa iikhrayitheriya ezongezelelweyo zokhuseleko. Umgangatho wamanzi okusela waseDenmark yenye yezona zinzima kakhulu eYurophu.